Waxaan kugu soo dhaweyneynaa adiga iyo qoyskaaga barnaamijka Tennessee WIC. Fadlan la xiriir Wic Clinic deegaankaaga haddii aad wax su'aalo ah qabtid. Raadi rugtaada WIC ee kuugu dhow adoo isticmaalaya “Soo hel Wakhtarka WIC”Ikhtiyaarka hoose.
Ma haysaa wax su'aalo ah ama waxaad dhibaato ku qabtaa isticmaalka WICShopper barnaamij? Email JPMA ugu dir WICShopper@jpma.com
Kaarka TNWIC waa kan!
Kaarka TNWIC ayaa hadda laga heli karaa dhammaan 95ka degmo!
Barnaamijka WIC ee Tennessee WIC wuxuu ka gudbay qaab warqad ku saleysan oo ah soo saarista waxtarka una gudbay nidaamka wareejinta elektaroonigga ah (EBT). Halkii laga soo saari lahaa qalabka cuntada waraaqaha (foojarrada), gargaarka cuntada ee WIC waxaa lagu soo shubaa koontada elektaroonigga ah.
Qoysasku waxay u isticmaalaan kaarkooda TNWIC iyo PIN-ka si ay uga iibsadaan cunnadooda WIC loo oggol yahay dukaamada cuntada ee loo oggol yahay WIC ayna doortaan farmasiyada.
Miyay tahay in aan helo dhammaan cuntooyinka WIC?
J: Maya, uma baahnid inaad iibsato dhammaan cuntooyinka WIC inta lagu jiro hal safar oo wax iibsi ah. Waad iibsan kartaa dhowr jeer inta aad ku jirto bisha waxtarkaaga. Haddii aadan hubin goorta dheefahaagu bilaabmaan iyo dhammaadka, la xiriir rugta caafimaadka ee WIC ee deegaankaaga.
S: Miyaan ku badali karaa cuntooyinka aanan isticmaalin iyo cunto kale?
J: Waxoogaa beddelaad ah ayaa loo oggol yahay cuntooyinka qaarkood. La xiriir rugtaada WIC ee deegaankaaga si aad ugala hadasho waxyaabaha aad kala dooran karto iyo in wax laga beddelo dheefahaaga cuntada. Wax bedel ah laguma sameyn karo dukaanka.
S: Maxaan sameeyaa haddii aan yareeyo ama joojiyo naas-nuujinta?
J: La xiriir rugtaada WIC ee deegaankaaga. Waxaad la kulmi doontaa khabiir ku takhasusay nafaqada oo aad kala hadli doontaa fursadaha aad heli karto.
S: Waxtarradayda ma loo rogi doonaa bisha xigta haddii aan la isticmaalin?
J: Maya. Gargaar kasta oo cuntada WIC ah oo aan la iibsan bishaas ma wareejin doono bisha xigta.
S: Dhammaan kaqeybgalayaasha WIC ma heli doonaan ogeysiis ku saabsan ballamahooda WIC ee barnaamijka WICSHOPPER?
J: Maya, weydii rugtaada WIC ee deegaankaaga haddii ballantaadu ka muuqan doonto barnaamijkaaga WICSHOPPER.
S: Sawirradu ma matalaad run ah baa u ah alaabooyinka ku yaal guryaha waaweyn?
J: Maya, sawirada wax soo saarka cuntada ayaa ah tusaalooyin isku mid ah waxaana laga yaabaa inaysan noqon isla sheyga saxda ah ee keydka dukaanka yaala
S: Waxaan helay kaar WIC cusub iyo dheefaha maanta. Goorma ayaan awoodi doonaa inaan ka qoro barnaamijka WICShopper?
J: Kaarkaagu wuxuu qaadan karaa ilaa 24 saacadood in lagu rakibo barnaamijka 'WICShopper App' marka gargaarka la qoondeeyo.
S: Waxaan haystaa kaarka TN WIC laakiin ma lihi faa'iidooyinka WIC. Goorma ayaan iska diiwaan gelin karaa kaarkayga barnaamijka 'WICShopper App'?
J: Waa inaad haysataa faa'iidooyinka WIC ee hadda si aad uga diiwaangeliso kaarkaaga barnaamijka WICShopper. Fadlan la xiriir rugtaada WIC ee kuugu dhow ballanta WIC si aad u hesho dheefaha WIC.
S: Waxaan ku isticmaalay kaarkayga WIC dukaanka raashinka maanta. Maxay dheelitirka dheefteyda ugu cusbooneysiin weyday barnaamijka 'WICShopper App'?
J: Dheelitirka dheefahaaga hadda wuxuu qaadan karaa ilaa 48 saacadood si aad uga aragto barnaamijka WICShopper.
S: Miyaan ku dari karaa in kabadan hal kaar barnaamijkayga WICShopper?
J: Haa, haddii aad haysatid kaar kale oo firfircoon oo TN WIC ah, waad ku dari kartaa barnaamijkaaga WICSHOPPER.
S: Ma baddali karaa taariikhda iyo waqtiga digniinta dhicitaanka Macaashka?
J: Haa. Tag setinka> Hoos kadhagayso Dooro Luuqadaada> Ogeysiiska Dhaafitaanka Waxtarka> Badbaadi Dejinta
S: Ma baddali karaa taariikhda iyo waqtiga ogeysiinta?
J: Haa. Tag setinka> Hoos kadhagayso Dooro Luuqadaada> Ogeysiisyada Ballanta> Keydso Nidaamyada
S: Miyaan ku beddelan karaa luqadda barnaamijkayga WICShopper?
J: Haa. Tag Hoyga> Meesha> Dejinta> Dooro Luqaddaada> Badbaadi Dejinta
S: Sideen ku ogaadaa haddii cuntada aan iskaanku ku jiro qorshahayga waxtarka?
J: Ka dib iskaan badeecad, shey cunto la oggol yahay ayaa ka soo muuqan doona xuduud cagaaran.
S: Sideen su'aalo u weyddiiyaa ama jawaab uga siiyaa khibradeyda WICSHOPPER?
J: Tag Hoyga> Hel Caawinaad ama Guri> Qiimee ama jawaab ka bixi
S: Miyaad ka geli kartaa wichealth.org barnaamijka WICSHOPPER?
J: Haa, waxaad ka heli kartaa wichealth.org Dashboardka. Markaad gasho wichealth.org, waxaad ka tegeysaa barnaamijka WICSHOPPER.
S: Sideen ku helaa nuqul ah alaab la oggolaaday oo aan iibsado?
J: Guriga> WIC Cuntooyinka La Oggol Yahay
S: Sideen ku helaa dukaamada WIC ee la ansixiyay ee ku yaal aaggayga?
J: Guriga> Bakhaarka WIC
S: Sideen ku helaa bukaan socod eegtada ugu dhow meesha aan ku yaal hadda?
J: Guriga> Raadi Rug Caafimaad WIC
S: Waxaan helay kaarkayga TN WIC toddobaadyo ka hor laakiin waxaan dhammaystiray ballantaydii oo waxaan helay dheefo maanta. Goorma ayaan barnaamijka ku arki doonaa faa'iidooyinkayga?
J: Dheelitirka dheefahaaga hadda wuxuu qaadan karaa ilaa 24 saacadood si aad uga aragto barnaamijka WICShopper.
Barnaamijka WICShopper wuxuu kuu oggolaanayaa inaad la socoto faa'iidooyinkaaga WIC iyo inaad iskaaniso alaabada ka soo horjeedda dheefahaaga hadhay si loo hubiyo inaadan wax dhibaato ah ku qabin diiwaanka. Haddii aadan weli diiwaangelin kaarkaaga TNWIC, taabo badhanka 'Faa'iidooyinkayga' si aad wax u bilowdo!
Ogeysiis muhiim ah: Faa'iidooyinka aad aragto dib ayaa loo dhigay illaa 48 saacadood. Hubso inaad hubiso dusha sare ee shaashadda dheefahaaga si aad u aragto goorta faa'iidooyinka loo soo raray WICShopper. Maskaxda ku hay in safarada wax iibsiga ee waqtigaas ka dib AANAY ka muuqan doonin dheelitirka dheeftaada!
Isticmaal "Soo hel Wakhtarka WIC”Badhanka barnaamijka WICShopper. Waxaad kaheli kartaa tilmaamaha rugtaada caafimaad isla markaana aad uga wacdaa isla barnaamijka.
Dib u eeg liiska wax iibsiga ee laga helay rugtaada caafimaadka ee WIC (sidoo kale waa la heli karaa) halkan) oo arag faa iidooyinkaaga hadhay adoo isticmaalaya badhanka 'Faa'iidooyinkayga' ee ku yaal WICShopper.
Dheelitirka macaashka ayaa tilmaamaya dhammaan faa'iidooyinka cuntada guriga ee laga heli karo kaarka eWIC.
Ka dukaamee oo kaliya dukaannada WIC ee la oggolaaday ee lagu aqoonsaday jumladda.
U sheeg khasnajiga inaad isticmaaleyso kaarka eWIC ka hor intaan alaabada la miiqin.
U sheeg khasnajiga haddii aad leedahay wax kuubanno ah oo aad jeclaan lahayd inaad isticmaasho.
Khasnajiga ayaa ku weydiin doona inaad geliso kaarkaaga eWIC, gal lambarkaaga lambar ee PIN-ka afarta ah, oo aad riixdo batoonka gelitaanka mashiinka.
* Kaliya 4 isku day aan ansax ahayn ayaa loo oggol yahay. Kaqeybgalaha ayaa sugi kara ilaa maalinta xigta inuu isku dayo macaamil si nidaamku si otomaatig ah dib ugu dajiyo ama waxay kala xiriiri karaan adeegga macaamiisha Conduent (844) 545-8405 hadday u baahan yihiin gargaar degdeg ah si ay u dhammaystiraan macaamilkooda.
Waxyaabaha cuntada ee ay WIC aqbashay waxaa laga goyn doonaa kaarka eWIC.
Hubi rasiidka si aad u hubiso in alaabada si sax ah looga jaro riix furaha si aad u xaqiijiso iibsashadaada.
Haddii aad iibsato waxyaabaha aan ahayn WIC, qofka khasnajiga ah wuxuu ku weydiin doonaa sida aad jeceshahay inaad u bixiso waxyaabahaas.
Marka macaamilka WIC la dhammeeyo, waxaa lagaa doonayaa inaad is rogto kaarkaaga iyo codka ama dhawaqa ayaa dhawaaqaya.
Lacag-hayuhu wuxuu ku siin doonaa risiit oo ay kuugu hadhayaan inta hartay bisha hadda.
Hubso inaad haysato kaarkaaga eWIC iyo risiidhka markaad ka baxdo dukaanka.
Macaashka aan la adeegsan ma socon doono illaa bisha soo socota.
Faa'iidooyin Kuma Filan - Waxaa laguu qoray dheefahaan, si kastaba ha noqotee wax ku filan oo kaaga harsan qaybtaan oo aad ku iibsan karto alaabada aad iskaan iska baadhay.
Tilmaamaha Dukaameysiga Tennessee WIC
Dhammaan macluumaadka ku jira websaydhka Waaxda Caafimaadka ee Tennessee waxaa loogu talagalay ujeeddooyin waxbarashadeed oo keliya oo looma isticmaali karo baadhitaan ama daaweyn. Macluumaadka waxaa loo bixiyey si loo sii fahmo nafaqada WIC iyo arrimaha la xiriira. Macaamiisha waa inaysan waligood iska indhatirin talooyinka caafimaad ama ay dib u dhigaan raadintooda sababtoo ah wax laga yaabo inay ku arkeen boggan. Khabiirada nafaqada, dhakhaatiirta, iyo xirfadlayaasha kale ee daryeelka caafimaadka waxaa lagu dhiirigelinayaa inay la tashadaan ilo kale ayna xaqiijiyaan macluumaadka ku jira boggan. Tixraacyada hay'ad aan dawli ahayn, wax soo saar, adeeg, ama ilo macluumaad oo laga yaabo inay ku jiraan boggan waa inaan loo tixgelin oggolaansho, mid toos ah ama mid maldahan, Waaxda Caafimaadka ee Tennessee. Intaa waxaa sii dheer, Waaxda mas'uul kama noqon karto macluumaadka ku jira boggaga kale ee degelkeeda lala xiriirin karo.